Sakanan’ny Sazy Amerikana Ny Fianarana Antserasera “Coursera” Ao Syria, Iran ary Kiobà (Vaovao Farany) · Global Voices teny Malagasy
Sakanan'ny Sazy Amerikana Ny Fianarana Antserasera “Coursera” Ao Syria, Iran ary Kiobà (Vaovao Farany)
Nandika (fr) i P.Baker
Voadika ny 10 Febroary 2014 14:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Català, Español, македонски, English
VAOVAO FARANY (30 janoary 2014) : Namoaka vaovao farany mikasika ny fidirana ao amin'ny habakany ao amin'ireo firenena niharan'ny sazy ny Coursera. Raha mbola voasakana ny tolotra Coursera ao Kiobà sy Iran ary Sodàna, efa miverina amin'ny toerany kosa ny an'ireo mpiserasera Syriana noho ny antony manokana izay “mamela ireo tolotra sasany ho fanohanana ireo asa fandaminana tsy miankina amin'ny fanjakana ao Syria, indrindra raha mikasika ny fampivelaana amin'ny fidirana amin'ny fampianarana izany.”
Noho ny sazy Amerikana, tsy afaka niditra tao amin'ny Coursera, sehatra fianarana antserasera intsony ireo mpianatra avy ao Syria, Sodàna, Iran ary Kiobà. Talanjona avokoa ireo olona nahita ity hafatra ity tao amin'ny solosainy raha saika hiditra hianatra tao amin'ilay habaka:
« Our system indicates that you are trying to access the Coursera site from an IP address associated with a country currently subjected to US economic and trade sanctions. In order for Coursera to comply with US export controls, we cannot allow you to access to the site.
Milaza ny mili-mpamantarana ato aminay fa miezaka miditra ato amin'ny habaka Coursera amin'ny alalan'ny adiresy manokana (IP) ao anatin'ny firenena iharan'ny sazy ara-toekarena sy ara-barotra Amerikana amin'izao fotoana izao ianao. Ho Fanajan'ny Coursera amin'ny [lalànan'ny] fanarahamaso ny entana aondran'i Etazonia, dia tsy afa-mamela anao hiditra ao amin'ny habaka izahay.
Naneho avy hatrany ny fahatezerany tao amin'ny pejy Facebookn'ny Coursera ilay mpianatra Iraniana Navid Soltani:
Nahoana ny voasakana ny fireneko?
Araka ny efa fantatrao angamba, misy fitsipika mandrara ny fandraharahana ao Etazonia, tahaka ny Coursera, tsy hanolotra servisy ho an'ireo mpiserasera monina ao amin'ireo firenena voasazy (Kiobà, Iran, Sodàna ary Syria). Tao anatin'ny fotoana maharitra dia tsy nazava ny fandraisana ny fomba nandikana ny lalàna mifehy ny fanarahamaso fanondranana entana noho izy mifandray amin'ny MOOC [massive open online course – fanampim-pampianarana antserasera misokatra ho an'ny daholobe], ka fomba fandraisana azy iray amin'izany lalàna izany ihany no narahan'ny Coursera.
Vao haingana ny Coursera no nahazo valinteny mazava milaza fa nosokajiana ho “servisy” (ny servisy rehetra dia voafehin'ireo fanarahamaso mikasika ny fanondranana) ny endrika sasany amin'ny MOOC. Raha afaka niditra tao amin'ny Coursera ireo mpianatra marobe monina ao amin'ireo firenena ireo taloha, midika izao fanovana izao fa tsy afaka manome ny tolotra Coursera hoan'ireo mpianatra monina ao amin'ireo firenena voasazy intsony izahay :
« Milaza ny mili-mpamantarana ato aminay fa miezaka miditra ato amin'ny habaka Coursera amin'ny alalan'ny adiresy manokana (IP) ao anatin'ny firenena iharan'ny sazy ara-toekarena sy ara-barotra Amerikana amin'izao fotoana izao ianao. Ho Fanajan'ny Coursera amin'ny [lalànan'ny] fanarahamaso ny entana aondran'i Etazonia, dia tsy afa-mamela anao hiditra ao amin'ny habaka izahay. »
Navid Soltani amin'i Coursera : Raha matoky ny teny filamatrareo ianareo « Mino izahay fa zo ny fampianarana. Ny andraikitry ny Coursera dia ny manome fampianarana tsara kalitao sy mamela ny olona hianatra tsy misy fetra», inona no dikan'izao? Voasakana ny fireneko!!!!?
Bilaogera Leila Nachawati nizara ny heviny:
— Leila Nachawati Rego (@leila_na) 28 janvier 2014
Raha matoky ny andraikiny manokana ho mpanova fiainana amin'ny alalan'ny fampianarana ny @coursera, tokony hiantoka ny fahafahana miditra indray ao amin'ny habakany any #Syria.
Bilaogera syriana Anas Maarawi nitsikera ny sazy Amerikana tao amin'ny bilaoginy [arabo] :
Ao anelanelan'ny sivana napetraky ny fitondrana, izay ahitana fanakatonana habaka aterineto an-jatony, sy ireo voka-dratsin'ny sazy Amerikana, nanjary manakaiky ny tsy azo tanterahina hoan'ny tanora ambiny ato amin'ny firenena ny miditra amin'ny fampianarana antserasera.
Lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Wamda, Nina Curley, manana fomba fijery mandray an-tanana ary nanontany raha tsy azo sorohana mihitsy izany:
Was this inevitable? A new solution is needed. Online education platform Coursera blocks students in Syria and Iran: http://wamd.at/1gi91iN
— Nina Curley (@9aa) 27 janvier 2014
Tsy azo sorohana ve izany? Tokony hikaroka vahaolana hafa. Manakana ny fidiran'ireo mpianatra Syriana sy Iraniana ao aminy ny habaka fampianarana antserasera Coursera
Na dia izany aza, iray amin'ireo mpampianatra ao amin'ny Coursera, Rolf Strom Olsen, tsy mahatakatra ny antony mahatonga ireo tsy-Amerikana ho voakasika ihany koa:
— Deny Setiyadi (@dgsetiyadi) 24 janvier 2014
@KirstenWinkler Esy e ry “fampianarana hoan'ny rehetra’. Mampalahelo tanteraka, sa tsy izany?